Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya eziya eAlUla zisuka eDubai naseKuwait kwiflynas ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeKuwait Breaking • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
I-Flynas isungula iinqwelomoya zokuqala zamazwe ngamazwe ukuya e-AlUla.
Inqwelomoya yokuqala eya e-AlUla iya kuvulwa nge-19 kaNovemba ka-2021, isuka kwisikhululo seenqwelomoya saseDubai ngexesha lomsitho okhethekileyo oza kubhiyozela imbali kunye nelifa lemveli le-AlUla kunye nokukhuthaza iinkonzo zohambo ngomoya eziphumelele ibhaso le-flynas.
Ukuqala nge-19 kaNovemba ka-2021, iindlela zokuqala zamazwe ngamazwe eziya e-AlUla ziya kunduluka eDubai naseKuwait.
Indiza yokuqala ngoNovemba 19 imiselwe ukuba ihambelane nomcimbi womculo olandelayo eMaraya.
UFaia Younan, i-soprano encinci kunye nebhendi yakhe ekumgangatho wehlabathi baya kucula eMaraya kwangolo suku lunye.
UFlynas, umthuthi wenqwelomoya welizwe laseSaudi kunye nenqwelomoya yexabiso eliphantsi kuMbindi Mpuma, ibhengeze ukwanda kwayo kweenqwelomoya zamva nje kubandakanya neenqwelomoya zokuqala ezithe ngqo kwisikhululo seenqwelomoya iAlUla International.
Ukususela kwi-19th NgoNovemba ka-2021, iindlela zokuqala zamazwe ngamazwe eziya e-AlUla ziya kuqala ukusuka dubai kunye neKuwait. Iindlela zasekhaya ezongeziweyo njengenxalenye yolwandiso ziquka iRiyadh, iDammam kunye neJeddah. Isibhengezo siphawula okokuqala ukuba abakhenkethi bamazwe ngamazwe bayakonwabela ukufikelela ngokuthe ngqo kwezona ndawo zibalulekileyo ze-archaeology kunye nembali kwihlabathi.
Inqwelomoya yokuqala eya e-AlUla iya kuvulwa nge-19th NgoNovemba 2021, ukusuka Airport International Dubai ngexesha lomsitho okhethekileyo oza kubhiyozela imbali kunye nelifa lemveli le-AlUla kunye nokukhuthaza iindiza' Iinkonzo zohambo ngomoya eziphumelele ibhaso.
Ethetha ngalo mgama, i-CEO kwi iindiza UMnu. Bander Almohanna uthe, "Siyavuya ukwenza i-AlUla ifikeleleke ngakumbi kubo bonke abahambi kulo mmandla, indawo yokuya ekhethekileyo kwaye ayisoze yasilela ukuchukumisa nabahambi abanamava." Wongeze wathi, "Siqinisekile ukuba intsebenziswano yethu kunye neKhomishini yasebukhosini ye-AlUla iya kuba yenye yezinto ezininzi ezinegalelo ekufezekiseni iinjongo ze-Saudi Vision 2030 zokuqhubela phambili isikhundla soBukumkani njengendawo ehamba phambili yokhenketho lwengingqi kunye nehlabathi."
UPhillip Jones, uMlawuli oyiNtloko woLawulo lweNdawo kunye neGosa leNtengiso yeKhomishoni yaseRoyal ye-AlUla (RCU) wathi, "Kwiminyaka eyiwaka, i-AlUla ibe yindlela edibeneyo yempucuko. I-oasis yethu yakudala yamkele abahambi kunye nabahlali ukuba babelane ngezinto ezithengiswayo, imibono kunye nokwakha uluntu. Namhlanje linyathelo elikhulu kwi-AlUla njengoko siza kuphinda sibe kumzila wabahambi bamazwe ngamazwe. Abakhenkethi banokufikelela ngokuthe ngqo kwi-AlUla ngeenqwelomoya ezisuka eDubai naseKuwait, sijonge ukwazisa iindwendwe ezongezelelekileyo kwindawo ekuyiwa kuyo. ”
Inqwelomoya yokuqala nge-19th UNovemba umiselwe ukuba uhambelane nomcimbi womculo olandelayo eMaraya. UFaia Younan, i-soprano encinci kunye nebhendi yakhe ekumgangatho wehlabathi baya kucula eMaraya kwangolo suku lunye.
Ishedyuli yeenqwelomoya zamazwe ngamazwe kunye nezasekhaya ukusuka/ukuya e-AlUla iya kuba:
Iinqwelomoya ezi-4 ngeveki phakathi kweAlUla kunye neRiyadh
Iinqwelomoya ezi-3 ngeveki phakathi kweAlUla kunye neDubai
Iinqwelomoya ezi-3 ngeveki phakathi kweAlUla kunye neJeddah
Iinqwelomoya ezi-3 ngeveki phakathi kweAlUla kunye neDammam
Iinqwelomoya ezi-2 ngeveki phakathi kweAlUla kunye neKuwait
Ngesi siganeko sibalulekileyo, i-flynas iphinda izibophelele ekuboneleleni ngeendawo ezinomtsalane nezifunwayo ezihlangabezana nokulindelekileyo komkhweli. Ngaphaya koko, i-flynas ijonge ukuhambelana nesantya esikhulayo semfuno yokhenketho kunye neshishini lokhenketho ekulindeleke ukuba libonelele ngembuyekezo enkulu kwinqanaba elizayo njengoko amazwe eqhubeka nokuchacha kwiziphumo ezingazange zibonwe ngaphambili zobhubhani we-COVID-19.